မြန်မာစစ်သားများအဖမ်းခံ၇စဉ်၇ိုက်ထားသောရှားပါးဓါတ်ပုံများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မြန်မာစစ်သားများအဖမ်းခံ၇စဉ်၇ိုက်ထားသောရှားပါးဓါတ်ပုံများ
Posted by Wai Phyoe on Feb 3, 2012 in Copy/Paste, Creative Writing, Drama, Essays.., Education, My Dear Diary, Myanma News, News, Other - Non Channelized, Photography, Society & Lifestyle | 38 comments
ခုတင်လိုက်တဲ့ပုံလေးက က၇င်စစ်သားများမှမြန်မာစစ်သားများအား အဖမ်းခံ၇စဉ်၇ိုက်ထားသောပုံများဖြစ်ပါသည်း
တကယ်တော့ မြန်မာစစ်သားတွေဟာလဲ တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ပေးပြီးထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေပါပဲ
အဲ့ဒါတော့ထောက်ခံတယ်ဗျာ။ ကောင်းတဲ့စစ်သား မ၇ှိသလို လစ်၇င် မဒိမ်းကျင့်ဖို့ချောင်းနေတဲ့စစ်သားတွေလဲ၇ှိပါတယ်။ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့နိင်ငံမှ မပာုတ်ပါဘူး နိင်ငံတိုင်းနီးပါးပါပဲ။
အောက်ဆုံးပုံကစစ်သားကတော့ မာတယ်ဗျ။လုံးဝကြောက်ပုံမပေါ်ဘူး မာန်လုံးဝချပုံမပေါ်ဘူး
Actually, there were photos taken by KIA.
The soldier wasaCaptain.
On that event, 1 Captain, 1 Lutinent and5other ranks were captured alive.
The video showed other around 10 bodies, burnt bodies onaburning car and weapons ( including5pistols ).
Both sides are Myanmar nationals but by their believes, they tried to kill each others.
Both sides love peace but still fighting.
We should to support Peace talks.
The best way is second Pin Lon Conference.
OK. Let’s try our best for our mother land.
ဒုက္ခ၊ ဒုက္ခ ကြည့်ရတာ စိတ်ဆင်းရဲတယ်။ စစ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာမှမရှိရင်ကောင်းမယ်။
ပာုတ်တယ်ဗျာ ဘယ်လိုပဲ စစ်သားအများစု မကောင်းဘူးပြောပြော မြင်တော့လည်းစိတ်မကောင်းဘူးဗျာ
သူတို့ခမျ ထမင်းကိုစား၇လားေ၇ကောသောက်၇၇ဲလား တွေးမိ၇င် ခုချက်ခြင်းသွားပြီး ပာင်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့ထမင်းသွားကျွေးချင်တယ်ဗျာ ခင်ဗျားတို့လည်းဆုတောင်းပေးကြပေါ့
ဒီပုံတွေကို ဒီလိုတင်တာ ကန့်ကွက်တယ်ကွာ
( လုံးဝကန့်ကွက်တယ် သဂျီးအနေနဲ့ ဒီပုံတွေကိုတင်တာ ကို ဆန်းစစ်ပေးစေလိုပါတယ် )
ငါလိုးမသားတွေ မင်းတို့ပြောတော့ စစ်တပ်ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်
ပာာာ ဘာလဲကွာ ၇ိုင်းလိုက်တာ ဒီိလိုပြောတာတော့မကောင်းပါဘူး ဒါလူတိုင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပဲ
ခင်ဗျားက၇ိုင်လှချည်လား တင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲ ဘာလို့ဂေဇက်က လူတွေကို ဆဲတာလဲ ခင်ဗျားလိုကောင်မျိုးမ၇ှိ၇င်ကောင်းမယ် ဓါတ်ပုံထဲမှာ ခင်ဗျား အဖေပုံပါလို့လား
သဘောတစ်ခုမှာ ကိုယ့်အဖေမှ သူ့အဖေမှဆိုတာမရှိပါဘူး
စစ်ပွဲတစ်ခုရဲ့သဘောအရ စစိသုံးပန်းတွေကို ထုပ်လွှင့်ပြသခြင်းမပြုရတဲ့
ကျုပ်ကတော့ ဒီလိုစစ်သုံးပန်းတွေကို ဥပဒေမဲ့ လူမြင်အောင်ပြတဲ့
http://www.myanmargazette.net ကို ကန့်ကွက်ပါတယ်
ဂဒါဖီတောင် ဒီလိုဘဲ ပြကြတာဘဲ ဖင်လာမကျယ်နေနဲ့
မဆဲရဆိုတဲ့စည်းကမ်းက ဘယ်တုန်းက ပျက်သွားတာလဲ
ဒီလို စစ်သုံပန်းပုံ များကိုမတင်သင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်
ပြည်တွင်းစစ်ပေမယ် ပြည်တွင်းစစ်မှာလဲ လိုက်နာကြမယ်ဆိုရင်
ဒီအဖမ်းခံစစ်သားရဲ့ မိသားစု ဆွေမျိုးတွေ မြင်ရင် ဘယ်လိုခံစားရမလဲ
လူသားခြင်း ခံစားချက်ကို စာနာဘို့ကောင်းပါတယ်
ငါးကို အခြောက်လှမ်းထားတဲ့ ငါးခြောက်ကို ငခြောက်လို့ ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်
ဘာငါးလဲဆိုတော့ ရေကူးတတ်တဲ့ ငါးဖြစ်ပါတယ် ….
(ဒီလိုပုံမျိုးတွေတော့ မတင်သင့်ပါ တင်ချင်ရင် … မျက်နှာလေးတွေကို ဖျက်ပြီး စိစစ်တင်ပေးသင့်ကြောင်းပါ … )
မြင်ရခဲတဲ့ ပုံမျိုးမို့ တင်ပေးသူကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … ။
ပြည်တွင်း စစ်မီးတွေ ငြိမ်းစေချင်တယ်
ညီးလင် ပေါ်တာထိမှ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်
ဟိုက် ဘယ်လိုဖြစ်နေကြပါလိမ့်ဗျာ သူကြီးရေ။ကြည့်ကူပေးပါအုံးနော်။ကိုဂျော်နီကြီးရေ
How come ur comment changed from +2 to -7 in2min? Do we have that much users now?
ယက်စ် ဝီဒူးဟက်ဖ် ( အက်ကောဒင်းတူသီ သဂျီး )
ဘိုး၈ ဘွား၈ တရပ်ကွက်လုံး၈ တဲ့ ပါးဗလစ် အညာဘုရားပွဲက ချီးပါတဲ့တွိုင်းလက်
( အဲ့သည် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သော စစ်သားတွေရဲ့
ဘဝအကြောင်းတွေကို ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လောက်
လေ့လာ တွေ့ထိဘူးသလဲဆိုတာလေးတော့ သိခြင်မိပါတယ်
စစ်အာဏာရှင်တွေကို မုန်းတီးတာနဲ့ မသိနားမလည်တဲ့ တပ်မတော်သားတွေ
အမုန်းတရားနဲ့ လက်စားခြေခြင်းတွေကို လက်မခံပေးနိုင်ဘူး
ဒီတစ်ဆိုဒ်လုံးမှာ တိုင်းရင်းသားတွေဖက်က ခံပြီးဟောင်တာ
ခင်ဗျားတို့ တော်တော်အရသာခံခြင်ရင် ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်မီးရှို့ပြီး
သိပ်တော့ မအံ့သြပါဘူး ခင်ဗျားတို့ကို
မ etone ပြောတာမှန်တယ် ခုမှဘဲ ဒါမျိုးပုံတွေ တွေရတော့တယ် တသက်လုံး သောင်းကျန်းသူတွေ သေတာ အဖမ်းခံ၇တာ တွေဘဲ ဖတ်ခဲ့ ၇တာ မရေမတွက်နိုင်တော့ပါဘူး မြန်မာ့ အလင်းသတင်းစာ မှာလဲ သောင်းကျန်းသူတွေရဲ့မျက်နှာကို မမြင်ရအောင်လုပ်ထားတာမတွေရပါဘူးဗျာ အတုံအလည့် ပဲပေါ့ ပြည်သူ မုန်းတဲ့ တပ်မတော် ရဲ့ဒီလို အဖမ်းခံ၇တာ သောက်သောက်လဲ သေနေတာ တွေ ၇တော့ စဉ်းစားမိပါတယ် ပြည်သူတွေကို နှိပ်စက် ဘုန်းကြီးတွေ ကို သတ်လို့ဒဏ်ခတ်တာခံနေရတာလားလို့ရဲဘော်သေ သေသော် ငရဲသွားပေါ့ မသေခင်လေးတော့ သုံပန်း ဖြစ်ရတဲ့ ဒုက်ခလေးတော့ ခံသွားကျပေါ့ဗျာ ကျွဲပါး စောင်းတီးမိပြန်ပေါ့ … သောင်းကျန်းသူတွေလို့ ပြောလို့ စိတ်မဆိုးကျပါနဲ့သတင်းစာထဲက အတိုင်းပြောတာပဲ ခုတော့တကယ့် သောင်းကျန်းသူ ဆိုတာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ လူတိုင်းသိလောက်ပါပြီ
2011/7/18 2:57 am တဲ့၊ ကင်မရာ ရဲ့ time setting မှန်ရင် တော့ မကြာ သေးဘူးပဲ။
တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ငြှင်းဆဲသတ်ဖြတ်ခြင်းများ ကင်းဝေးပြီး
တန်းတူညီမျှ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ ဖော်ဆောင်နိုင်ကာ
ဒီပုံတွေမတင်သင့်ပါဘူးဗျာ။တစ်ဖက်က အနိုင်ရလို့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာတင်တာလား။မလုပ်သင့်ပါဘူး။
အထက်ကလူကြီးတွေက သေလောက်အောင် ဇိမ်ခံနေတဲ့ အချိန်အောက်က လက်အောက်ငယ်သား
တွေအသက်ပေးနေရတယ်။ကချင်စစ်သားဘဲဖြစ်ဖြစ် စစ်တပ်ဘဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးကလူ့အသက်တန်ဘိုး
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် နစ်နာရတာ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေပါပဲ။ သဘောထားမတူလို့ ဖြစ်တာ။ ရင်ဘတ်ချင်းငြိကြရအောင်လားနော်။ စစ်ဆိုတာ မဖြစ်လေကောင်းလေ။ ဒေါသဆိုတာမဖြစ်လေ ကောင်းလေ။
၀မ်းသာလို့တင် တာလား စာနာမှုနဲ့တင်တာလား စာသားလေးဖတ်ချင်ပါတယ် ဓါတ်ပုံက ဘာကိုရည်ရွယ်
တာလဲက ပုံထက် အရေးပါ ပါတယ် ပို့စ် တင်တာ ကြည့်တဲ့ ပရိတ်သတ်က တင်တဲ့သူရဲ့ စေတနာနဲ့
ဝေဒနာကိုပါ ပါဝင်ခံစားချင်ကြပါတယ် တင်တာကို ကန့်ကွက်ရင်လဲ ငြင်းခုန်တာတဲ့စာရင် ignore လုပ်တာ
တည်ဆောက်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပျက်ပြားဖို့အတွက် ဒေါသကိုဆွပေးတဲ့ပုံကလေးတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပါတယ်။
မဖြစ်နိုင်လို့ သတ်ပစ်တာလဲရှိမှာပါ။ဒါပေမယ့် မြန်မာစစ်တပ်ကတော့မိရင်သတ်ပစ်
တစ်ခါတစ်လေ လဲ ငတို့ ရွာလေး က ဒီလို ဖြစ်ပေးဦးမှပေါ့ နော
စစ်သားပါ …. ဒါပေမဲ့ စစ်သားပါပဲ။
အဲဒေါ့ ကိုဂျော်နီမိုက်ကယ်အောင်ပုက ဘာဆက်ပြောချင်သလဲ။ လုပ်ပါအုံး…။
ဘယ်သူဘာပြောပြော…ထာဝရကန့်လန့်တိုက်သူများလည်း…စားရေး၊ နေရေး၊ ၀တ်ရေး၊ အိပ်ရေး၊ သွားရေး
ကိုဝေဖြိုးရေ။ မြန်မာစစ်သား၊ ကရင်စစ်သားဆိုတဲ့ အသုံးလေးကို ကန့်ကွက်ပါရစေလား။
စစ်သားက စစ်သားပါဘဲ။အတူတူပါဘဲ။ဖမ်းခံရတာဆိုတော့ စိတ်တော့ မကောင်းဘူး။
burma wantharnu says:
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအစိုးရအား တော်လှန်တိုက်ခိုက်နေသော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များစွာရှိပါတယ် တကယ်လို့များပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ခဲ့လျှင် ဘယ်သူ့အဖေခေါ်ရမှန်း မသိသလို အရမ်းထိက်လန့်စရာကောင်းပါတယ် အဲဒီလိုများပြားလှတဲ့ အဖွဲ့တွေကို သစ္စာရှိ မျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့ သူပုန်ကလွှက်ပေးလည်းပြန်လါလျှင် ထောင်ကျမဲ့စစ်သားလေးတွေက နှစ်ပေါင်းမျာစွာအကာအကွယ် ပေးနိုင်ခဲ့လျှင် ဘာမဟုက်တဲ့ တောင်ကုက်လို အကြမ်းဖက်မူ့၊ မောင်တောအကြမ်းဖက်မူ့ လောက်က အမှန်တကယ် ဖြစ်စရာအကြောင်း မရှိနိုင်တဲ့အတွက် အသုံးချဖန်တီးနေမူ့ကို သတိထားပြီး ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသားများ ယခင်အတိုင်း ချစ်ခင်စွာ နေပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ ပုံ/ ၀ံသာနု